सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक सकियो, के भयो निर्णय ? « Sagarmatha Daily News
सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक सकियो, के भयो निर्णय ?
काठमाडौं : सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध चार दलका नेताहरूबीचको बैठक सकिएको छ । आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको गठबन्धनका नेताहरूको बैठकमा अबको बैठकमा सभापति तथा अध्यक्षहरू मात्र बस्ने समझदारी भएको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार अर्को बैठकको समय भने तोकिसकिएको छैन ।
शीर्ष नेताहरूको बैठकमा अझै पनि मन्त्रालयको भागबन्डा मिल्न सकेको छैन । सरकार गठन भएको डेढ महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन् सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको भोलिपल्ट २९ असारमा प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको भरमा सरकार चलाइरहेका छन् ।
एक राज्यमन्त्रीसहित ६ मन्त्री सबै दललाई बराबरी हुने गरी बनाउने एकमुष्ट समझदारी भए पनि कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने विषय विवादित बनेको छ । त्यसैले अर्को बैठक गठबन्धन दलका सभापति तथा अध्यक्षहरू मात्रको बस्ने समझदारी भएका छ ।
आज बिहान ९ बजेको बैठकमा सबै दलले दोस्रो तहका नेताहरू समेत राखेका थिए ।